I-HomePod yesizukulwana sesibini inokubandakanya i-ID yobuso | Ndisuka mac
URuben inyongo | | Iimveliso ze-Apple
Isithethi sokuqala se-Apple, esibizwa njalo IPod Home. Le modeli yokuqala iya kuba yindlela eya kuthi ihlasele ngokuthe ngqo ikhaya elinezixhobo ezixhumeneyo kunye nokunxibelelana nemiyalelo yelizwi ngokusebenzisa umncedisi weSiri.
Inkampani ephethe ulwakhiwo lwayo ifumaneka eTaiwan. Ukusuka apho amarhe eza nge-CEO yenkampani yokwakha i-Inventec Appliances. Ngokwentloko yayo, baya kuba sele besebenza kwimodeli elandelayo. Kwaye le iza kuza neendaba ngokwakwitekhnoloji yokwamkelwa. Ewe, ngokuchanekileyo, sithetha i-ID yobuso.
Le nkqubo iyavula yenye ezikhuselekileyo namhlanje. Izinga lempazamo liphezulu kakhulu kunoko kunokufumaneka kwi-ID yangoku yeTouch. Yiyo loo nto iApple ifuna ukwenza le nkqubo kwezinye iikhompyuter. Eyokuqala eye yavakala ngamandla yile IPad yonyaka olandelayo. Kwaye ayimangalisi loo nto. Ngaphezu, le iPad inokujonga ngokusondeleyo kwi-iPhone X kune-iPhone 8.
Ewe, yintoni enokwenza ukuba ibenomdla kakhulu ekuphumezeni i-ID yobuso kwisizukulwana sesibini sePodPod? Ewe, kufuneka sikhumbule ukuba i-iPhone X ayisebenzi kuphela ukuvula i-terminal, kodwa yenzelwe ukugunyazisa iintlawulo ngeqonga le-Apple Pay okanye ukuthumela i-Animojis eyaziwayo. Ngele ndlela, Umsebenzisi wePodPod unokugunyazisa intlawulo ngesithethi esihlakaniphile, ukwenza ubomi babasebenzisi lula kwaye ubanike okongezelelekileyo ekufumaneni okunokwenzeka. Oko kukuthi, umzekelo uya kuba nakho ukuthenga ngeveki ngeAmazon- umzekelo- kwaye xa ilixesha lokuhlawula, yima nje phambi kwekhamera amehlo akho evulekile kwaye intlawulo yenziwe ngokuzenzekelayo. Ngoku, asilindelanga ukuba lonke olu tshintsho kude kube sekupheleni kuka-2018 okanye ekuqaleni kuka-2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » I-HomePod yesizukulwana sesibini inokubandakanya i-ID yobuso